सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउनेमा म ढुक्क छु: लक्ष्मी श्रेष्ठ • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
सिन्धुपाल्चोक, असोज २६ । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि प्रमुख दललहरुले धमाधम उम्मेदवारहरु सिफारिस गरिरहेका छन् । आगमाी निर्वाचनकालागि सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसले पनि उम्मेदवारहरुको लगभग टुंगो लगाईसकेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्षेत्र नं १ मा नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन र वामगठबन्धनबीच कडा रस्साकस्सी हुने देखिएको छ ।
महिला हक अधिकारको समान हैसियतको साख राख्न एकाउन्न प्रतिशत भूमि ओगटेका नेपाली महिला जगतले आफूलाई समयको मूल धारमा ल्याउन निक्कै कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ । जबसम्म राज्यको पहुँचमा नारीहरुको दरो उपस्थिति हुदैन तबसम्म वर्तमानमा देशले पाउने निकासा पनि सहज देखिदैन । देशको यति ठूलो हिंसालाई विभिन्न बहानामा अझै पनि पछाडि पार्ने हो भने नयाँ नेपालको परिकल्पना पनि नारामा नै सीमित रहने छ । त्यसैले यो नारालाई पनि गतिशील बनाउन सम्पूर्ण नारीहरुले आफ्ना हरेक क्षेत्रबाट बुलन्द आवाज उठाउनै पर्छ । हामीले आफ्नो कर्त्यब्य र अधिकारलाई राम्ररी बुझेर आफ्नो जीवनको सुरक्षा गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जगाउनु पर्छ । एकजुट भएको शशक्त आवाजले मात्र नारी हक र अधिकारहरु स्थापित गर्न सकिन्छ । यसका लागि इच्छा शक्तिको जरुरत पर्छ । इच्छा शक्ति बलियो भएपछि कुनै पनि गन्तव्य असम्भव हुँदैनन् । यसमा कुनै संका छैन, कांग्रेसले विजयी जुलुस मनाईसक्यो ।